မိုဒရစ်ဟာ FIFA The Best ၊ ဥရောပအကောင်းဆုံးဆုတွေကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီးသားပါ
ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံးဆု (၃)ခုကို တစ်ပြိုင်နက် ရခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက်ကစားသမားအဖြစ် Modric မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မလား
9 Oct 2018 . 4:09 PM
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ဂုဏ်သိက္ခာအရှိဆုံးဆု (၃)ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ FIFA The Best ဆု ၊ UEFA က ချီးမြှင့်တဲ့ ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု ၊ နာမည်ကြီး ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းက ချီးမြှင့်တဲ့ Ballon d’Or ဆုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုတွေထဲက တစ်ခုခု ရရင်အောင် အဲဒီကစားသမားအတွက် အောင်မြင်မှုလို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီး (၁)နှစ်တည်း (၂)ခု ဒါမှမဟုတ် အားလုံး ရခဲ့ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် တံခွန်နဲ့ ကုက္ကားပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆု(၃)ခုစလုံးကို (၁)နှစ်တည်း သိမ်းကျုံးယူနိုင်ခဲ့သူက ရှားရှားပါးပါး တစ်ဦးသာရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ပေါ်တူဂီစူပါစတား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အဲဒီဆု(၃)ခုစလုံးကို (၂)နှစ်ဆက်တိုက် တစ်ပြိုင်နက် ရရှိခဲ့တာပါ။
Ballon d’Or ဆုက ၁၉၅၆ ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်အထိ ဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပေမယ့် ၂၀၁၀ မှာ ပြင်သစ်မဂ္ဂဇင်းနဲ့ FIFA တို့ ပေါင်းပြီး FIFA Ballon d’Or လို့ ပြောင်းလဲ ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ ၂၀၁၆ မှာတော့ သူတို့နှစ်ဖွဲ့ လက်တွဲဖြုတ်ခဲ့ပြီး FIFA က The Best ဆု၊ ပြင်သစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းက အရင်အတိုင်း Ballon d’Or ဆုကို ပြန်လည် ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်။
UEFA က ပေးအပ်တဲ့ ဥရောပအကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆုက ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကမှ စတင် ချီးမြှင့်ခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ FIFA The Best ဆု ၊ ဥရောပ အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု၊ Ballon d’Or ဆိုပြီး ဆု(၃)ခုအထိ ဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ အခုလောလောဆယ်တော့ ခရိုအေးရှား ၀ါရင့်ကွင်းလယ်လူ မိုဒရစ် Modric ဟာ အဓိက ဆု(၃)ခုထဲက The Best နဲ့ ဥရောပအကောင်းဆုံး ဘောလုံးသမားဆုတို့ကို ရယူခဲ့ပြီးပါပြီ။ တကယ်လို့ Ballon D’or ဆုကိုသာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုလိုမျိုး အဓိက ဆု(၃)ခုစလုံးကို (၁)နှစ်အတွင်း ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက် ကစားသမားဖြစ်လာမှာပါ။
နောက်ထပ် ဂုဏ်စရာကောင်းတာက မိုဒရစ်ဟာ ဥရောပအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆု ၊ FIFA The Best ဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ခရိုအေးရှား ကစားသမားအဖြစ် စံချိန်ရေးထိုးခဲ့သလို Ballon D’or ဆု ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း သမိုင်းတစ်လျှောက် အဲဒီဆုကို ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ခရိုအေးရှားကစားသမားအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ် . . .
2016 1st Portugal Cristiano Ronaldo
2017 1st Portugal Cristiano Ronaldo
2018 1st Croatia Luka Modrić
2016 Portugal Cristiano Ronaldo
2017 Portugal Cristiano Ronaldo
ဂုဏျသိက်ခာအရှိဆုံးဆု (၃)ခုကို တဈပွိုငျနကျ ရခဲ့တဲ့ ဒုတိယမွောကျကစားသမားအဖွဈ Modric မှတျတမျးဝငျနိုငျမလား
ကမ်ဘာ့ဘောလုံးလောကမှာ ဂုဏျသိက်ခာအရှိဆုံးဆု (၃)ခု ရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ FIFA The Best ဆု ၊ UEFA က ခြီးမွှငျ့တဲ့ ဥရောပအကောငျးဆုံးဘောလုံးသမားဆု ၊ နာမညျကွီး ပွငျသဈမဂ်ဂဇငျးက ခြီးမွှငျ့တဲ့ Ballon d’Or ဆုတို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီဆုတှထေဲက တဈခုခု ရရငျအောငျ အဲဒီကစားသမားအတှကျ အောငျမွငျမှုလို့ သတျမှတျရမှာဖွဈပွီး (၁)နှဈတညျး (၂)ခု ဒါမှမဟုတျ အားလုံး ရခဲ့ရငျတော့ အတိုငျးထကျအလှနျ တံခှနျနဲ့ ကုက်ကားပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ဒီဆု(၃)ခုစလုံးကို (၁)နှဈတညျး သိမျးကြုံးယူနိုငျခဲ့သူက ရှားရှားပါးပါး တဈဦးသာရှိပါသေးတယျ။။ အဲဒါကတော့ ပျေါတူဂီစူပါစတား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ပဲဖွဈပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ အဲဒီဆု(၃)ခုစလုံးကို (၂)နှဈဆကျတိုကျ တဈပွိုငျနကျ ရရှိခဲ့တာပါ။
Ballon d’Or ဆုက ၁၉၅၆ ကနေ ၂၀၀၉ ခုနှဈအထိ ဆုခြီးမွှငျ့ခဲ့ပမေယျ့ ၂၀၁၀ မှာ ပွငျသဈမဂ်ဂဇငျးနဲ့ FIFA တို့ ပေါငျးပွီး FIFA Ballon d’Or လို့ ပွောငျးလဲ ခြီးမွှငျ့ခဲ့တယျ။ ၂၀၁၆ မှာတော့ သူတို့နှဈဖှဲ့ လကျတှဲဖွုတျခဲ့ပွီး FIFA က The Best ဆု၊ ပွငျသဈဘောလုံးမဂ်ဂဇငျးက အရငျအတိုငျး Ballon d’Or ဆုကို ပွနျလညျ ခြီးမွှငျ့ခဲ့ကွတယျ။
UEFA က ပေးအပျတဲ့ ဥရောပအကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားဆုက ၂၀၁၁ ခုနှဈကမှ စတငျ ခြီးမွှငျ့ခဲ့တာဖွဈတာကွောငျ့ ၂၀၁၆ ခုနှဈမှာ FIFA The Best ဆု ၊ ဥရောပ အကောငျးဆုံးဘောလုံးသမားဆု၊ Ballon d’Or ဆိုပွီး ဆု(၃)ခုအထိ ဖွဈလာခဲ့တာပါ။ အခုလောလောဆယျတော့ ခရိုအေးရှား ဝါရငျ့ကှငျးလယျလူ မိုဒရဈ Modric ဟာ အဓိက ဆု(၃)ခုထဲက The Best နဲ့ ဥရောပအကောငျးဆုံး ဘောလုံးသမားဆုတို့ကို ရယူခဲ့ပွီးပါပွီ။ တကယျလို့ Ballon D’or ဆုကိုသာ ရခဲ့မယျဆိုရငျ စီရျောနယျလျဒိုလိုမြိုး အဓိက ဆု(၃)ခုစလုံးကို (၁)နှဈအတှငျး ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ ဒုတိယမွောကျ ကစားသမားဖွဈလာမှာပါ။
နောကျထပျ ဂုဏျစရာကောငျးတာက မိုဒရဈဟာ ဥရောပအကောငျးဆုံးဘောလုံးသမားဆု ၊ FIFA The Best ဆုကို ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ခရိုအေးရှား ကစားသမားအဖွဈ စံခြိနျရေးထိုးခဲ့သလို Ballon D’or ဆု ရခဲ့မယျဆိုရငျလညျး သမိုငျးတဈလြှောကျ အဲဒီဆုကို ဆှတျခူးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ခရိုအေးရှားကစားသမားအဖွဈ မှတျတမျးဝငျမှာပဲ ဖွဈပါတော့တယျ . . .